Julen Lopetegui oo amaan kala dul dhacay weeraryahanka kooxda Real Madrid Karim Benzema – Gool FM
Julen Lopetegui oo amaan kala dul dhacay weeraryahanka kooxda Real Madrid Karim Benzema
Dajiye September 2, 2018
(Real Madrid) 02 Seb 2018. Julen Lopetegui ayaa amaanay qaab ciyaareedka laacibka kooxda Real Madrid ee reer France Karim Benzema, kadib markii uu bandhig cajiib ah ka sameeyay inta uu socday kulankii Leganes.
Laacibka reer France ee Karim Benzema ayaa ka dhaliyay 2 gool kulankii ay xalay guusha kaga gaareen 4-1 kooxda Leganes horyaalka La Liga ee dalka Spain, Lopetegui ayaana ku amaanay qaab ciyaareedka uu bixiyay Benzema.
“Karim Benzema waa ciyaaryahan muhiim ah ee aad u wanaagsan, waan ku faraxsanahay inuu si fiican u shaqeeyo, isla markaana uu kooxda ka caawiyo”.
Julen Lopetegui ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay dooqyada uu u heysto labada goolhaaye uu ku heysto kooxda Real Madrid ee Keylor Navas iyo Thibaut Courtois, iyo fursada uu helay Courtois kulankii Leganes.
“Waxaan go’aansanay in kulankan uu ciyaaro Thibaut Courtois, waxaan u heysanaa dhanka goolka qorsho gaar ah, baal aan aragno waxa dhaca isbuuc kasta, iyo sida ay wax u dhici doona inta ka harsan xili ciyaareedka”.
HORDHAC: Barcelona v SD Huesca, Barce oo Weli aan laga Dhalin Gool
Allegri oo ka hadlay xaalada Ronaldo, kadib markii uusan wax gool ah dhalinin kulankiisii saddexaad ee xiriir ah